သန်းထိုက်ဦး| January 11, 2013 | Hits:2,586
Lailun January 11, 2013 - 1:37 pm Well! The SSA was promised by Aung Min that the government troops would not attack them but it was empty promise. As long as Burmese military is not under the president’s power, what can Aung Min do with the UNFC? Another empty promise again?
Reply thihamin January 11, 2013 - 9:23 pm နိုင်ဟံသာ သို့ -
Reply ပါကြီးဖိုး January 12, 2013 - 4:47 am တိုင်းရင်းသားများရဲ့ ဘာသာစကား၊ စာပေယဉ်ကျေးမှု မပျောက်ပျက်သွားစေဖို့၊ ဖွံ့ဖြိုးစည်ပင်လာစေဖို့နဲ့ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်များအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့ နိုင်ဟံသာတို့လို တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များကို လေးစားလျက်ပါ။ ဘယ်စာပေယဉ်ကျေးမှုမဆို ပျောက်ပျက်မသွားထိုက်ပါ။ ပိုပြီးတိုးတက်စည်ပင်လာဖို့ကိုသာ အားပေးကူညီရမှာပါ။ တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကို အစိုးရအနေနဲ့ တရားဝင် အသိအမှတ်ပြုပေးရမှာပါ။ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များအနေနဲ့လည်း ညီညွတ်မှုကို အဟန့်အတားဖြစ်စေမယ့် အယူအဆ၊ အမြင်သဘောထားတွေနဲ့ အပြောအဆိုတွေကို သတိထားကာ ရှောင်ရှားသင့်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ နိုင်ဟံသာရဲ့ စကားဟာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တိုင်းရင်းသားအရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ယုံကြည်မှုမရှိတဲ့သဘော သက်ရောက်ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ကိုတောင် မယုံကြည်နိုင်ရင် ဘယ်သူ့ကို ယုံကြည်တော့မှာလဲဆိုတာ မေးစရာဖြစ်စေပါတယ်။ သေချာစွာ စဉ်းစားသုံးသပ်မှုမရှိဘဲ အခြားလူမျိုးများကို သိမ်းကြုံးကာ မယုံကြည်ခြင်း၊ သံသယကြီးခြင်း၊ မုန်းတီးခြင်းဟာ မိမိအမျိုးကို ချစ်တယ်လို့ ယူဆတဲ့ သူတွေကို တွေ့ဖူးပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့ သဘောထားရှိကြောင်းကိုလည်း ကိုယ့်လူမျိုးအချင်းချင်းကြားမှာ လွဲမှားစွာ ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားကာ အာပေါင်အာရင်းသန်သန် ပြောတတ်ကြပါသေးတယ်။ ထိုကဲ့သို့ စိတ်ဓါတ်မျိုးနဲ့ ပြည်ထောင်စုမတည်ဆောက်နိုင်ပါ။ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြောင့် မြန်မာပြည်ဟာ ပြည်တွင်းစစ်ရှည်ကြာပြီး ဆင်းရဲတွင်းနက်နေရတာကို ငြင်းပယ်ရန်မရှိပါ။ သို့သော် အနာဂတ် စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်လာစေရေးမှာ သက်ဆိုင်ရာ ခေါင်းဆောင်အသီးသီးရဲ့ အမြင်ကျဉ်းမှု၊ ဥာဏ်အမြှော်အမြင်နဲမှု၊ မာနအတ္တကို ရှေ့တန်းတင်မှုတွေကြောင့် မအောင်မမြင်ဖြစ်ရမှု၊ အဟန့်အတားဖြစ်ရမှုတွေ မပေါ်ပေါက်စေလိုတာ အမှန်ပါ။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးကို မျက်ကွယ်ပြု၍ မရတာဟာလည်း အမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် လူမျိုးတွေ ဘယ်လိုကွဲကွဲ တစ်နေ့မှာ သေကြရမယ့် လူသားတွေအဖြစ်နဲ့တော့ အတူတူသာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်ကို မမေ့ကြဘူးဆိုရင် မိမိတို့ရဲ့ မာနအတ္တကို အတန်အသင့် လျှော့ချနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံနဲ့ ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားတဲ့ စစ်မှန်တဲ့ပြည်ထောင်စု အမြန်ပေါ်ပေါက်ကာ တိုင်းရင်းသားပြည်သူတစ်ရပ်လုံး ဆင်းရဲတွင်းမှ လွတ်ကင်းကာ အေးချမ်းစွာ ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်ကြပါစေ။
Reply Oak Soe January 13, 2013 - 6:31 am People are dying and also most all gone but consultations are not started yet. So funny politic system and governors.